Dhalinyarada iyo dhibaatada | Suomen Mielenterveysseura
Dareenka dhalinyarada ee dhibaatada naxdinta leh, wuxuu noqon karaan mid xoogan, xiliggaas in kaalmo la helana aad ayey muhiim u tahay. Dhalinyarada waxaa u fudud in ay kaalmo ka raadiyaan saaxiibadood, intii ay ku tiirsanaan lahaayeen qoyskooda ama qof xirfad leh.
Dhalinta kale waxaa laga yaabaa in aysan diyaar u ahayn in ay wajahaan ama dareemaan dhacdada naxdinta leh ee saaxiibkood, taas oo xaaladda dhalinyarada ka sii dhigeysa mid culus. Mararka qaar dhibaatadu waxay durbadii biseyl u yeeshaa qofka dhalinyarada ah, taas oo sababta in kuwa ay isku da’da yihiin in uu u arko caruur iyo kuwo ku cusub.
Dhalintu waxay u baahanyihiin waqti badan in qofka weyn uu la joogo iyo in jadwalkii reerku uusan is bedelin sida xiliggii wax la wada cuni jirey. Jadwalku wuxuu keenayaa dareen nabadeed iyo in noloshii ay sii socoto, xilli uu jiro isbedel muuqda oo ku yimid nolosha.